Río Segura: njirimara, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu osimiri kachasị mkpa na Spain. Ọ gbasara Osimiri Segura. Ọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Spain ma ọ bụ otu n'ime isi mmalite mmiri ndị dị mkpa na Europe. Mgbatị ya niile bụ kilomita 325 na bezin ya na-ekpuchi ebe kilomita 14.936. Na mmechi, mgbe ọ gafesịrị mpaghara 4, ọnụ ya dị n'oké Osimiri Mediterenian.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Osimiri Segura na njirimara ya.
2 Ihu igwe nke osimiri Segura
3 Osisi na mmiri nke osimiri Segura
Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime obere basins kachasị na Spain niile, a na-ewere akwụkwọ n'ihi ogologo ya. Ọ bụ otu n'ime osimiri ndị a kacha eji eme ihe maka ọdịmma nke ndị bi na mpaghara ebe ọ na-esi. Ma ọ bụ ụzọ ntụgharị maka njegharị ndị njem nlegharị anya agbanyeghị ọchịchọ ha nwere n’ihi ide mmiri. Mkpụrụ ala nke mbara ala pụtara na mgbe oke mmiri zoro obere oge, ụzọ nke osimiri ahụ nwere ike ime ka idei mmiri.
Osimiri a dum nwere ụdị usoro iri nri nke osimiri. N'otu aka, anyị nwere ụtụ n'isi na onye ọzọ n'ọtụtụ ndọtị ya. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ebe isi iyi ya dị elu, a na-ahapụ ya ka ọ nweta mmiri gbazee sitere na Sierra de Segura n'oge oge opupu ihe ubi. Mmiri nke na-abịa site na agbaze a ezuolarị nri nke osimiri.
Ihe ndi ozo bu uzo ochichi nke Mediterranean. Nke ahụ bụ, a na-ahụkarị ya inwe nnukwu idei mmiri n’agbata oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri na ọdịda n’ala n’oge opupu ihe ubi na ọkọchị. Eziokwu nke ọdịda a n'osimiri n'oge oge kachasị ọkụ nke afọ na-aghọ ihe na-akpata nchegbu nye ndị bi na ya.
Otu n'ime ihe e ji mara Osimiri Segura bụ mmiri doro anya doro anya. Karịsịa, achọtara ya na mpaghara akụkụ nke elu nke mmalite nke etiti ya. Na mpaghara ndị a Ha bụ mmiri kristal kpamkpam ebe ọ bụ na ha emetọghị site na mpụga ọ bụla. Nke nta nke nta ha na-enweta a bluish ụda m na-eme ya dị ka earthy green agba. Nke a bụkarịrị ihe dị iche iche dịka mgbanwe nke mbara ala na mmetọ.
Mmiri ahụ rutere n'ogologo ya kachasị elu na ngalaba dị n'etiti. Ọ bụ ebe a ka mpaghara ndị dị nso na-ejikarị ya. Otu n'ime ebe kachasị were osimiri Segura bụ Murcia. Ka osi di, obu kwa ebe enwere oke egwu nke unwu. Ogologo omimi dị gburugburu mita 70 ke ini m isdụhe ke ndaeyo
Ihu igwe nke osimiri Segura
N'ebe niile osimiri Segura na-asọ, yana ọchịchị ya na-aga n'ihu, ọ dabere na mpaghara. Iji maa atụ, anyị na-ahụ nke ahụ na nkụnye eji isi mee, ịbụ na ịdị elu nke mita 1.413 n'elu ọkwa mmiri na-ajụ oyi dịtụ oyi. Agbanyeghị, ogo ndị a na nkezi ruru ogo 28 n'oge oge ọkụ. N'oge oyi nke afọ ndị ọzọ nke afọ ọ na-abịakarị nkezi nke ogo 13.
Ka elu na-ebelata ruo mgbe ọ ruru n'ụsọ oké osimiri, ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye. N'ebe o na-aga, a na-enwe nkezi kwa afọ nke ogo 18. Oge oyi na-adịkarị n’agbata Disemba na Jenụwarị, ebe ọnwa ndị kacha nwee okpomọkụ bụ Julaị na Ọgọst. Banyere mmiri ozuzo, usoro mmiri ozuzo ka ukwuu na mpaghara ugwu. Dika anyi rutere ugwu di elu anyi nwere ugwu mmiri ozuzo di elu. Na mpaghara ala na etiti etiti anyị nwere ụkpụrụ 1.000 mm kwa afọ. N'aka nke ọzọ, mgbe anyị rutere mpaghara ọnụ, anyị na-ahụ na nkezi anyị nwere naanị 300 mm kwa afọ.
Na ala gbara osimiri okirikiri nso n'ọnụ ya anyị nwere efekarị na mpaghara. Njem nleta na-adaberekwa na ihu igwe. Akụkụ nke osimiri Segura nke nwere ọrụ ndị njem na mkpa ka ukwuu na-etinye uche na akụkụ nke elu na nke etiti ebe ha mara mma karịa na ọkwa okike. Eziokwu ahụ bụ na mmiri aghọwo kristal doro anya na-adọta ọtụtụ ndị njem na-aga n'okporo ụzọ njem. Na mgbakwunye, ha bụ mpaghara ebe o nwere ogo kachasị elu. N’ebe ndị dị elu, a na-eme njem njem na ịgba ugwu. Isi mmalite ya dị na Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Natural Park. Ebe a na-achọkarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile n'afọ.
N'ebe enwere uzo ka elu ị nwere ike kayak na raft na Rapids. N'ịbụ isi iyi nke osimiri ahụ na ịdị ọcha kachasị elu na mmiri, ị nwere ike ịsa ahụ na ha ma enwere ọdịnala nke ị drinkingụ ihe ọ thatụ thatụ bụ isi iyi n'onwe ya. Obodo niile gbara oke osimiri ahụ mara ezigbo mma maka ndị njem na-achọ ịmata ihe na mpaghara ime obodo.
Osisi na mmiri nke osimiri Segura
Ebe ọ bụ na ha bụ osimiri na-agafe gburugburu ebe nchekwa sitere n'okike, ọ bụ ebe obibi n'ọtụtụ ụdị dị iche iche gbasara ahịhịa na ahịhịa. Ọ bụ ezie na ọ belatala n'ihi ụba mmadụ na mmetụta gburugburu ebe obibi, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị ahịhịa ka dị. Ekwesiri iburu n'uche na oru ndi mmadu dika oru ugbo na-akpata ufodu ihe ndi ozo.
A na-ekewa ahịhịa dịka oge achọtara ya. N'ihi ọtụtụ ihu igwe anyị na-ahụ n'akụkụ osimiri ahụ, anyị nwere ụdị osisi dị iche iche. Ha na-ahụ onwe ha oke ohia nke pines, daffodils, geraniums, ndi di ike ma di anya nke echekwara nye otutu ha. Otu osisi na-adọta mmasị kachasị bụ osisi na-eri anụ nke a maara dịka Pinguicula Vallisneriifolia.
Tupu anyị eruo mpaghara Murcia, anyị hụrụ oke ọhịa jupụtara na osisi willow, osisi pọpla na osisi elm. Enwekwara ahihia na nkpuru ahihia nke edere edere, akwa ahihia na ahihia. Banyere ụmụ anụmanụ, enwere ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche kesara n'etiti anụmanụ, anụ ufe na ihe na-akpụ akpụ na ihe iyi egwu. N'ime nnụnụ ndị nọ n'ihe egwu ịla n'iyi, anyị na-ahụ Kingfisher. Banyere azụ, enwere nnukwu ọnụnọ nke azụ azụ na egwurugwu. Otú ọ dị, nke ikpeazụ a emela ka ọnụọgụ ndị bi na ya belata.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Segura na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Osimiri Segura
Specific okpomọkụ nke mmiri